३ करोड नेपालीको ढुकढुकीमा रहेको रबि लामिछानेको आयो यस्तो दुखको खबर , अब के होला ? हेरेर अवस्य शेयर गर्नुहोला ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > ३ करोड नेपालीको ढुकढुकीमा रहेको रबि लामिछानेको आयो यस्तो दुखको खबर , अब के होला ? हेरेर अवस्य शेयर गर्नुहोला !
काठमाडौं, ४ वैशाख । नेपालमा पत्रकारिता गर्दागर्दै रबि लामिछाने अमेरिका हानिए । अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि फेरि पत्रकारितामा नै फर्किए । त्यतिबेलासम्म उनलाई थोरैले मात्र चिन्थे । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एउटा प्रस्ताव लिएर गए । लाइभ टेलिभिजन सोमा सिधा जनताका प्रश्नका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम चलाउने । लामिछानेको प्रस्तावमा ओली राजी भए ।
नेपाल टेलिभिजनमा सुरु भयो कार्यक्रम– सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग । कार्यक्रम लोकिप्रिय भयो ।अकस्मात सरकार फेरियो । कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डसँग उनले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव राखे । तर, स्वतन्त्र पत्रकारलाई प्रचण्डले विश्वास गरेनन्, आफ्नै पार्टीका पत्रकारलाई राखेर सो कार्यक्रम चलाए । आफूले सिर्जना गरेको कार्यक्रम अरुलाई सुम्पिएर लामिछाने बिदा भए । प्रचण्डले उक्त कार्यक्रमबाट उनलाई निकाल्नु नै उनको जीवनमो टर्निङ प्वाइन्ट बन्न पुग्यो ।
चालक एजी शेर्पाको यहि एउटा सत्य निर्णय थियो जस्ले खरानी बन्दै गरेको ७७ जनालाई पुनर्जिवन दिए…